Delaware LLC: Zvese zvaunoda Kuti Uzive - Bhizinesi Dzidziso, Sanganisa kana Fomu iyo LLC uye Dzivirira Zvinhu
Delaware LLC: Zvese zvaunoda Kuti Uzive
Kugadzira iyo Delaware LLC inogona kunge iri imwe yeakanakisa mafambiro angaite muridzi webhizinesi. Chekutanga pane zvese, Delaware ndeimwe yevatatu vane hushamwari-hushamwari nyika murudzi (pamwe ne Nevada uye Wyoming). Chechipiri, maitiro ese aya anokurumidza, nyore, uye anouya nemhando dzakasiyana dzebhenefiti. Chechitatu, nemutemo weDelaware, haufanire kugara mudunhu kuti ugadzire LLC muDelaware. Chekupedzisira, ino inoshanduka bhizinesi bhizinesi ine yakaderera yekutanga-up mitengo.
Wagadzirira kutanga asi usingazive pekutangira? Pedzisa fomu rekutaurirana riri pano kana kushandisa imwe yenhamba dzenhare pane ino peji. Zvichakadaro, hezvino zvese nezve zvese zvaunoda kuti uzive nezveDelaware LLCs.
Maererano ne Investopedia, yakashomeka mutero kambani, inowanzozivikanwa seI LLC, inzvimbo yemubatanidzwa inopa mutoro kuchengetedzwa uye kuyerera-kuburikidza nemutero wevaridzi. Mune mamwe mazwi, iyo LLC inobata varidzi (inowanzonzi nhengo) sevadyidzani. Nekukanganisa IRS inoibata sega yega proprietorship yezvinangwa zvemutero kana iine nhengo imwechete; semubatanidzwa kana iine maviri kana anopfuura. Uye zvakare, iyo IRS zvakare inopa mukana kune iyo kambani kubvisirwa mutero senge mubatanidzwa, ingave C kana S. Saka, kusiyana nekambani ine rakakura mutero kuchinjika. Ndokunge, iwe unogona kusarudza kuve neiyo LLC mutero mune imwe yenzira ina.
Mumwe anofanirwa kufaira zvakanyatsorongedzwa zvinyorwa zvesangano nenyika. Nekudaro, varidzi vanogona kuperetera zvese mutero, manejimendi, uye zvido zvesangano muchibvumirano chekushanda chakazvimirira. Nekudaro, chimiro ichi chinovapa mukana wekubata bhizinesi ravo sezvavanoona zvakakodzera. Panguva imwecheteyo, iyo LLC inogona kuchengetedza yavo nhumbi kana mumwe munhu akamhan'arira kambani.
Mashandiro anoita Delaware LLC Anoshanda
Zvinyorwa zvesangano, kana Chitupa Chekuumbwa, zvinofukidza zvese zvekutanga zveDelaware LLC, zvinosanganisira:
Mazita evaridzi / nhengo uye mamaneja
Zita nekero yemumiririri akanyoreswa
Zita nekero rekambani
Urongwa hwebhizinesi, chinangwa, uye chimiro chekambani
Saizvozvowo, chibvumirano chekushanda chinogona kuisa zvimwe zvehurongwa uye manejimendi zvido. Hazvidiwe nehurumende. Nekudaro, kusave neyako kunogona kudzikisira zvakanyanya mabhenefiti ekudzivirira ematare. Saka, ita shuwa kuti iwe une hunyanzvi hwakanyorwa chibvumirano chekushanda.
Zvinonakidza zviitiko zveDelaware LLC:
LLC nhengo share mune purofiti / kurasikirwa kwekambani zvakanyorwa mune iyo LLC chibvumirano chekushanda.
Kugadzirisa Delaware LLC inowira kunhengo pachadzo, maneja wakabhadharwa, kana komiti manejimendi. Nhengo zvakare dzinokwanisa kuita sevashambadzi vanoita mari.
Delaware LLC mitero zvakavakirwa pane purofiti yekambani uye kurasikirwa. Sekuyerera-kuburikidza nesangano nekutadza, iyo LLC inopfuudza iyo purofiti / kurasikirwa kwekambani kunhengo dzayo. Naizvozvo, purofiti yakanyorwa pane wega mutero unodzoka wemitezo seyako wega, kwete kambani, mari.
LLC kodzero dzekuvhota muDelaware kazhinji, asi hazvidiwe kuve, zvichibva pamitezo yemari yemari yemari. Kana chibvumirano chekushanda chisingavhare kodzero dzekuvhota, iyo LLC inofanirwa kuregedza mitemo yeDelaware yekuvhota.
Delaware LLC chinja mitemo tendera nhengo kutengesa kana kupa mubereko mukambani kune mumwe munhu. Izvi ndezvenguva yakareba sekuti nhengo dzese dzakavhota uye dzakazowana mvumo yakawanda kusati kwatanga. Kana chibvumirano chekushanda chisingavhare mitemo yekuchinjisa, Delaware inopa yekudzokera mitemo.
Delaware LLC Inobatsira
Kunyangwe iwe uri kutanga bhizinesi diki kana kuunganidza mari yekudyara, iwe unogona kunge wakanzwa kuti kuumba Delaware LLC isarudzo inozivikanwa. Saka, chii chiri kukakavara pamusoro pazvo? Delaware LLCs inouya neakawanda ehupfumi! Ingotarisa izvi zvinomwe mabhenefiti ekuumba iyo Delaware LLC
1. Zvakareruka uye Kuchengeteka
Kusiyana nematunhu mazhinji, Delaware haidi kuti iwe ubatanidze mazita nekero dzemitezo kana mamaneja pane zvinyorwa zvekuumbwa kweV LLC Izvi zvinodzivirira hunhu hwako uye ruzivo rwemunhu kubva pakuve yeruzhinji rekodhi. Panzvimbo iyoyo, iwe unongofanirwa kudoma munhu wekutaurirana uye Delaware akanyoreswa mumiririri kuti aumbe kana kuchengetedza yako LLC. Zvakare, Delaware LLCs inoda zvishoma kugadziriswa pasina kuvhota kana musangano zvinodiwa kunze kwechibvumirano chekushanda chakamisikidzwa nenhengo dzeMDC.
2. Hapana chinodiwa chekugara
Sezvo nyika yeDelaware ichibvumidza vekunze-vezvematongerwo enyika, haufanire kurarama kana kuita bhizinesi muDelaware kuti ugadzire Delaware LLC. Iwe hautombofaniri kugara muUnited States. Nyika inongoda kuti iwe uchengetedze mumiririri akanyoreswa muDelaware kubata ese matsamba matsamba kubva kuDanho reMakambani. Zvakare, haufanire kuwana rezinesi reDelaware bhizinesi, kunyoresa neDhipatimendi Rezvemari, kana kubhadhara mutero wakakura wemarisiti weDelaware.
3. Kubhadhara mutero
Delaware ndiyo inonyanya bhizinesi-inoshamwaridzika nyika kana zvasvika pamitero. Semuenzaniso, Delaware LLCs anoshanda kunze kwenyika haabhadhare mutero wekutengesa, mutero wemari, kana mutero wemari isingabatike (yezvinhu zvakaita semvumo uye zviratidzo). Zvakare, nhengo dze LLC dzinogona kusarudza kuti mari yekambani inobhadharwa sei. Sarudzo dzinosanganisira:
Kutarisirwa: Imwe-nhengo LLC inobhadhara mari uye wega-wega mutero pamatare ebhizinesi mari. Mitero uye zvinobviswa zvinoyerera zvichipinda kumitezo yemunhu yemitero.
ushamwari: Nhengo yega yega yeiyi yakawanda-nhengo LLC inobhadhara mari uye yekuzvishandira mutero pachikamu chavo chemari. Mitero uye zvinobviswa zvinoyerera zvichipinda kumitezo yemunhu yemitero.
S Corporation: Mumwechete- kana mazhinji-nhengo LLC ayo mafaera emitero gore rega. Iyo purofiti uye migove inoyerera ichienda kune yemugovani wega mafomu emitero yemari.
C Corporation: I LLC inobhadhara mutero wemakambani mutero wayo wakachengetedzwa uye nhengo dzinobhadhara mutero wemari pakubhadhara kubva kusangano.
4.Flexible Management Dhizaini
Imwe yemabhenefiti akakurisa eUSununguko rusununguko rwechibvumirano. Iyo LLC inoshanda chibvumirano (gwaro rakagadzirwa nenhengo dzeMDC) inoisa chimiro chekambani. Naizvozvo, mazwi ese nemitemo inogona kuenderana kuti izadzise zvinodiwa nenhengo. Delaware LLC nhengo dzinogona kubata kambani ivo pachavo kana kusarudza mamaneja kuti vazviitire ivo. Zvakare, munhu asina kuroora kana investor anogona kuumba iyo Delaware LLC. Mune mamwe mazwi, iwe unogona kuve Mutungamiriri, Mutevedzeri Wemutungamiriri, Secretary, uye Treasurer vese vakakunguridzirwa kuita rimwe.
5. Low kutanga-up mari
Mari isingadhuri yekuumba uye kuchengetedza Delaware LLC inoita kuti ive sarudzo inozivikanwa kune vanhu vazhinji. Sekureva kweiyo Delaware Chikamu cheMakambani 'mubhadharo urongwa, Kugadzira Delaware LLC kwakadzikira zvakanyanya kupfuura mamwe matunhu. Mari dzegore rega dzinosanganisira iyo franchise mutero fizi iyo inosiyana gore kusvika pagore uye yakanyoreswa mumiriri fizi. Nemitengo yakaderera yakadai uye isina mari inodiwa, kuumba iyo Delaware LLC inokodzera chero chero bhajeti.
6. Kuchengetedza kwakanyanya kwezvinhu zvako
Delaware LLCs inopa dzakasiyana siyana chengetedzo chengetedzo kune varidzi vebhizinesi. Nechinhu chimwe chete, ngatiti mumwe munhu anokunda mutongo kukambani yako. Muchiitiko ichocho, zvikwereti zvinongomanikidzwa kukambani - kwete yako wega - chivakwa. Zvakare, kana nhengo yeiyo LLC iine zvikwereti kana mutongo wakapihwa kwavari, vakweretesi havagone kutevera zvinhu zveV LLC.
Zvakare, nhengo uye mamaneja eDelaware LLC vanogona kuramba vasingazivikanwe. Nekudaro, izvi zvinoita kuti zvive nyore kudzivirira zvinhu kubva kune vangangove vakweretesi. Zvichitaurwa zviri nyore, yemuno Delaware LLC yakanyoreswa mumiririri inogona kubvisa zvese zvinongedzo kune vanoita mari kuti iyo chete IRS izive nezve ako pfuma nemari.
Kuchaja Kudzivirirwa Kudzivirirwa
Muchokwadi, nezve iyo chete nzira yevanokweretesa kuteedzera nhengo yemuridzi kufarira muDelaware LLC ndeyekuwana odha yekuchaja. Maererano ne Investopedia, odha yekuchaja inobvumira mukweretesi kuti aise chirevo pane kufarira kwenhengo kune iyo LLC. Mukweretesi anogona, mukufunga, kutora mari yakabhadharwa kune anonzi zita nhengo, mudiwa, kana "muridzi" weI LLC.
Ramba uchifunga, izvi hazvipe mukweretesi kodzero yeuridzi kukambani. Izvo zvinongoreva kuti mukweretesi anogona kunamatira kugovera kune ane chikwereti kudzamara chikwereti chabhadharwa. Neraki, Delaware inopa kuchaja kuchengetedza chengetedzo kune maAdvs. Kusiyana nedzimwe nyika, kuchaja maodha muDelaware kunongopa mvumo kune vanokweretesa kune imwe nhengo inofarira mari. Mukweretesi haakwanise kuishandisa kufungidzira pane zvinofarirwa nemuridzi we LLC kana kumanikidza iyo LLC kuputsa nekutengesa zvinhu zvayo.
Zvino, hechino chikamu chakanaka. Mumatunhu mazhinji unoda nhengo mbiri kana dzinopfuura kana iwe kurasikirwa nechaji chengetedzo. MuDelaware, iwe unongoda nhengo imwe chete kuti unakidzwe nedziviriro yaunopihwa nechaji. Wyoming neNevada ndidzo chete dzimwe nyika mbiri, sekunyorwa uku, kuve nemunhu-mumwe wekuchaja chengetedzo.
Akakweretesa Booby Musungo
Zvinotowedzera nani; zvirinani kwazvo. Yako LLC haidi kugovera kwauri kuburikidza nekureba kwekuchaja odha. Naizvozvo, iyo mari inoungana mune yako LLC uye wako waakakwereta haagamuchire chinhu. Zvakare, Revenue Ruling 77-137 inoti chero munhu ane mvumo yekugovera anofanira kubhadhara mutero pavari kunyangwe iye achigamuchira kana kwete. Saka, wako waakakwereta anonamira nemutero wako bhiri, asi haagamuchire mari. Iwe unoverenga izvo chaizvo. Wako waakakweretesa anofanira kubhadhara mutero pachikamu chako chemubatsiro kunyangwe iye mukweretesi achigamuchira kugoverwa kana kwete. Mushure mekutanga mutero bhiri, vasina mari yekuzviratidza, vazhinji vakweretesi vanoenda pasi kudare redzimhosva vobvisa odha yekuchaja.
7. Mitemo yebhizimisi yakasimba
Imwe bhenefiti yekuumba yako LLC muDelaware inhoroondo yenyika refu yekumisikidza bhizinesi-inoshamwaridzika mirawo. Kazhinji zvinonzi mutungamiri wenyika murudzi rwebhizimusi mutemo, Delaware inopa dzakasiyana siyana mirawo iyo nyika zhinji dzinoshandisa semamodeli pavanonyora yavo yemakambani mitemo. Delaware ine yakatarwa nedare, iyo Dare reChancery, yekubata nemakakatanwa ebhizinesi. Ichizivikanwa nehunyanzvi hwayo hwemutemo wekambani, Dare reChancery rinofunga nyaya dzese nevatongi, kwete majuri, avo vane hunyanzvi munzvimbo ino uye vanoshandisa anopfuura mazana maviri emakore emakore emutemo wezviitiko mukutonga kwavo.
Dare reChancery rinofunga zvinopfuura chiuru zvematare ehurumende gore rega rega, saka makakatanwa mazhinji emutemo angangodaro akatopikiswa mudare. Izvi zvinopa varidzi vebhizimusi zano rekuti vagadzirise kana kurwira mhosva pamberi penguva, izvo zvinogona kukuchengetedza nguva yakawanda nemari yakashandiswa pamari yemutemo.
Maitiro Ekugadzira iyo Delaware LLC
Nekudaro, iwe wafunga kuenda kumberi nekuumba iyo LLC muDelaware. Asi kutanga kupi? Neraki, kugadzira Delaware LLC kuri nyore. Maitiro ekunyorera anowanzo kutora angangoita mavhiki e4-6, asi sarudzo yekukurumidza inowanikwa (yemubhadharo wekuwedzera) uyo unotora zvishoma sezuva rimwe chete rebhizinesi, pamwe nemazuva 1-3 ekutumira.
Tanga pane yako Delaware LLC fomendi nekutevera aya mashanu matanho.
1. Sarudza zita
Yese kambani inoda zita, uye yako Delaware LLC haina kusiyana. Ita shuwa kuti rako rekambani rinoenderana neDelaware kudoma mazita. Semuenzaniso, zita rako:
Inofanira kusanganisira "limited dhizimusi kambani" kana imwe yeayo mapfupiso
Inoda shanduro inofambidzana kana iine mazwi mune mumwe mutauro
Inogona kuda mamwe mapepa uye munhu ane rezinesi kana achishandisa mazwi akarambidzwa (semuenzaniso Gweta, Bhangi)
Haifanire kusanganisira mazwi anogona kuvhiringidzwa nehurumende agency (semuenzaniso FBI, State department)
Haifanire kusanganisira mazwi anoonekwa seasina kuchena, ane rusarura, kana anopokana naDelaware Secretary of State
Tarisa kuwanikwa kwezita rako rekambani rakasarudzwa. Kana iwe uchida kuti isu tigadzire yako Delaware LLC, fonera mahofisi edu uye uone kuti nderipi zita riripo. Iwe unogona zvakare kutsvaga kana bhizinesi rako richiwanikwa sewebhu domain.
2. Sarudza yakanyoreswa LLC mumiririri muDelaware
Zvinoenderana neDelaware state mutemo, chero kambani yakaumbwa mudunhu inofanirwa kuve neanyoresa mumiririri. Yako huru bhizinesi nzvimbo yekutaurirana nenyika, vamiririri vakanyoreswa vanogashira magwaro emutemo pachinzvimbo chako. Vakanyoreswa vamiririri vanofanirwa kuve nekero yebhizinesi yemuno muDelaware kuti vakwanise kuve yako Delaware LLC yakanyoreswa mumiriri. Isu tinopa zvakanyoreswa mumiriri masevhisi mune ese makumi mashanu matunhu.
3. Isu tinoseta Chitupa cheKufundiswa
Kufaira Chitupa Chekuumbwa neDelaware Chikamu cheMakambani zvakafanana nekunyora gwaro rekuzvarwa kune yako Delaware LLC. Sezvambotaurwa, Chitupa cheMafomu chinonyora ruzivo rwakakosha nezvekambani yako, senge zita nekero yeDelaware LLC yako nekero yemumiriri wako akanyoreswa. Zadza fomu rekubvunza pane ino peji kana kushandisa imwe yenhamba dzenhare dziri pamusoro uye isu tichafara kukubatsira.
4. Isu tinogadzira chibvumirano chekushanda
Kunyangwe isingadiwe nenyika yeDelaware, chibvumirano chekushanda chinoratidzira muridzi uye mashandiro ekushandisa eDelaware LLC yako. Segwaro repamutemo, chibvumirano chekushanda:
Maumbirwo emari uye ekudyidzana hukama nevako varidzi
Inobatsira kuchengetedza chinzvimbo chako chakaringana
Ita shuwa kuti kambani yako inotongwa nemitemo yako, kwete iyo yakagadzirwa nehurumende
Patinoumba iyo LLC isu tinopa otomatiki chibvumirano chekushanda.
5. Gadzira Mushandirwi Chitupa Nhamba (EIN)
Chaizvoizvo nhamba yekuchengetedzwa kwenharaunda kukambani yako, iyo EIN imwe fomu yeTerepayer Chitupa Nhamba iyo inobatsira iyo IRS kuziva bhizinesi rako mutero uye kufaira zvinangwa. Izvo zvakare zvinokutendera iwe kuvhura iyo LLC bhizinesi bhangi account, kunyorera marezinesi uye mvumo, faira mutero, uye kubata mubhadharo wemushandi. Nhau dzakanaka: isu tinokwanisa kunyorera EIN iwe. Ingobvunza mumiriri.
Kunyangwe kuumba iyo LLC muDelaware kunonzwika nekukurumidza uye nyore, iwe unofanirwa kufukidza ese mabhesi ako nekubvunza neyedu Delaware LLC nyanzvi usati watora. Chikwata chedu chinokufamba nemuitiro wese kuona kuti unonzwisisa zvizere nhungamiro nemabasa. Isu tinofara kupindura mibvunzo yako nezvinonetsa, saka bata timu yedu nhasi.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa muna Kubvumbi 15, 2021